प्रचण्डको बेजोड मन्तव्य : हामीले तपाईहरुको विश्वासको सट्टामा के दियौं ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रचण्डको बेजोड मन्तव्य : हामीले तपाईहरुको विश्वासको सट्टामा के दियौं ?
माघ २४ गते, २०७६ - १७:३९
हाम्रा ऐन कानूनहरुलाई कसरी राष्ट्रिय पूँजीपति, मध्यम वर्ग र तल्लो वर्गको हितमा लैजाने भन्ने कुरामा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कर प्रणाली लागु गर्दा पनि प्रगतिशिल कर प्रणाली लागु गर्ने कुराको सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । दलाल, नोकरशाही पुँजीपतिलाई अलि कडाईपूर्वक हामीले बाँध्ने नीति नियम बनाउन सकेनौं भने हाम्रा योजनाहरु असफल हुनसक्छन् ।
२०६४ को निर्वाचनमा मध्यम वर्गले कस्तो प्रवृत्ति, पार्टी र नेताहरुलाई सहयोग गर्यो र २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा कता पट्टि ढल्कियो ? यसलाई मसिनो गरि हेर्यो हाम्रो पार्टी घोषणा, गठबन्धन, साझा उम्मेदवार र साझा घोषणामा मध्यम वर्गले विश्वास गरेको हो । मध्यम वर्गको विश्वास र तल्लो वर्गको विश्वासकै आधारमा हाम्रो पार्टी विजयी भएको हो ।
तर विजय भएसँगैको यो अवधिमा धेरै प्रश्न उठेको छ । के हामीले यो बीचको अनुभवबाट मध्यम वर्गको भरोसालाई सम्मान गर्न सक्यौं त ? के मध्यम वर्गले गरेको योगदानको बदलामा आवश्यक पर्ने ऐन, नियम र कानून बनायौं ? उनिहरुलाई हामीले राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधा कति पु¥यायौं ? आज गम्भिर रुपले समिक्षा गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । त्यो वर्ग जसले हामीलाई यहाँ पठायो, हामीले त्यसको निमित्त गर्यौं कि उपल्लो दलाल, नोकरशाही वर्गको निमित्त गर्यौं ? हामीले जानेर या नजारेर दलाल नोकरशाहीको हितमा त काम गरिराखेका छैनौं ? प्रश्न एकदमै गम्भिर रुपले उठेको छ । त्यसको समिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्लमाक्सले आफ्नो जमानामा संविधानको विषयमा निकै ठूलो बहस बुर्जुवाहरुको बीचमा गरेका थिए । एकपछि अर्को बुर्जुवा, विद्धानहरुले संविधानको ड्राफ्ट गर्थे र तेरोभन्दा मेरो संविधान ‘मोर प्रोगेसिभ छ’ इत्यादि आदि भनेर टिप्पणी गर्थे । त्यतिबेला कार्लमाक्र्सले उनिहरुलाई सोधेका थिए, ‘के कागजमा राम्रो कुरा लेख्ने तर त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न तिम्रो साथमा सेना छ ? तिम्रो साथमा ऐन कानूनहरु छन् ? के तिम्रो साथमा अदालत छ ? तिम्रो साथमा कर्मचारी तन्त्र छ ? यदि तिम्रो साथमा कर्मचारीतन्त्र, अदालत, सेना र पुलिस छैन् भने तिमीले जतिसुकै राम्रो संविधान ड्राफ्ट गरेपनि त्यो कागजको खोस्टो बाहेक केहि हुँदैन ।’
माघ २४ गते, २०७६ - १७:३९ मा प्रकाशित